Ahoana ny fomba hahazoana asa any Los Angeles - ALinks
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Los Angeles (LA)?
Raha tsy Kalifornia na Californiaiac ianao dia mbola afaka mitady asa any Los Angeles fa tsy afaka mahazo fahazoan-dàlana hiasa irery. Hanana asa in Los Angeles, mila manana tolotra asa aloha ianao. Ny mpampiasa iray, na ny orinasa mpanolotsaina, na masoivohon'ny asa dia tokony hangataka visa miasa amin'ny anaranao raha vantany vao nanapa-kevitra ny hampiasa anao izy ireo.
Raha any ivelany ianao, dia azonao atao ny mangataka amin'ny alàlan'ny kaonsily LA eo an-toerana hahazoana ny visa asanao. Raha any Los Angeles ianao, ny lehibenao dia mangataka, miaraka aminao, amin'ny fahazoan-dàlana hiasanao.
Miasa ao LA dia feno fifanoheran-kevitra, toy ny tontolon'ny jeografika. Ny tsenan'ny asa dia goavana sy mifaninana. Samy misy ny tontolon'ny birao haingana sy milamina. Mety ho tsotra ny fahazoana asa, saingy mety ho sarotra ny mitady toerana mety mandoa vola. Ny fitadiavana asa tsara dia mety ho dingana sarotra. Aza matahotra anefa, mahazo ny lamosinao izahay!
Toerana fikarohana asa 5 ambony any Los Angeles, Kalifornia
Betsaka ny fandefasana asa an-tserasera any amin'ny faritra Los Angeles. Jereo ao amin'ny LinkedIn sy Eny tokoa, ohatra. Liana ianao miasa amina orinasa manokana, zahao ny tranonkalany hahitana raha manana faritra ivoahan'ny asa izy ireo. Na, raha liana amin'ny indostria manokana ianao, manadihady raha manana tranonkala natokana ho an'ny asa izy. Asa marobe amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny, ohatra, no afaka mahita amin'ny alàlan'ny Starwood Jobs.
Los Angeles namboarina: Ny Los Angeles namboarina dia mifantoka amin'ny fisokafan'ny asa any amin'ireo orinasa mpanangana sy teknolojia mampientanentana indrindra ao an-tanàna. Ny vola, ny HR, ny atiny ary ny vokatra dia anisan'ny sokajy ao amin'ny satan'ny asa.
Los Angeles Times: Ny interface mora ampiasana an'ity tranonkala ity sy ny sokajy maro karazana dia mahatonga azy io ho loharano tena ilaina amin'ny fitadiavana asa.
Sampan-draharahan'ny asa any California: Ny fitantanam-bola, ny fanabeazana, ny governemanta federaly, ny fitsaboana, ary ny ankamaroan'ny indostria malaza any California dia misokatra. Azo jerena ao amin'ilay tranonkala koa ny loharanom-pahalalana momba ny asa sy ny fanairana momba ny asa amin'ny mailaka.
CaliforniaJobNetwork: Ahitana karazana asa fisokafana isan-karazany ao amin'ity tranonkala ity, ary koa fampahalalana momba ny asa aman-draharaha, vaovao momba ny hetsika ho avy, ary torohevitra mifandraika amin'izany hanampy anao amin'ny famolavolana ny asa fikarohana sy ny lalan'ny asa maharitra.
LACity: Misy ny mpitandro ny filaminana, ny fitantanana ny valan-javaboary, ny mekanika, ny teknolojia fampahalalana ary ny anjara asan'ny mpitondra fivavahana.
Masoivoho miasa sy mpiasa tsy miankina
Ireo masoivohon'ny Temp sy ny orinasan'ny mpiasa dia alternatives hafainganam-pandeha sy haingana hahazoana asa any Los Angeles. Manome toerana vonjimaika izy ireo izay mitarika amin'ny asa manontolo andro. Saingy, ireo orinasa ireo dia tsy manome antoka ny fametrahana asa. Ary mety manana olana amin'ny fahazoana mpanohana visa ianao.
Inona avy ireo asa sy fahaiza-manao takiana indrindra?
Los Angeles dia mametraka haingana ny tenany ho mpifaninana amin'ny sehatry ny teknolojia, na dia tsy dia malaza amin'ny anarana hoe Silicon Valley mpifanila vodirindrina aminy aza izy. Raha ny filazan'ny Fast Company dia misy orinasa 2,200 XNUMX any amin'ny faritr'i Los Angeles ankehitriny. Ny biotech, commerce, ary ny serasera no mitondra ny ankamaroan'ity fitomboana ity. Netflix, Ticketmaster, Verizon, Symantec, ary SpaceX dia ao amin'ireo orinasa voarohirohy. Santa Monica sy Venice Beach no toeram-panombohana betsaka.
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Los AngelesLos Angeles
Kiraro mandeha tongotra tsy tantera-drano ho an'ny vehivavy tsara indrindra ho an'ny dia! Zahao eto!
Fotoana tsara indrindra raha mitsidika an'i Alemana
Ireo masoivoho afaka manampy anao any Kanada
Firenena ambony 5 mba hifindra monina ny Indiana
Ampiharo ny UK Visa amin'ireto dingana tsotra ireto !!
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Sydney ??
Toerana 5 tsara indrindra ao Aotrisy izay azonao jerena.
Afghanistan (11) fanampiana (10) Aostralia (17) Aotrisy (12) Kanada (21) Shina (17) Kolombia (7) Danemark (11) DR Kongo (7) Frantsa (16) Germany (17) mandehana (27) fahasalamana (29) Hong Kong (11) trano fandraisam-bahiny (28) trano (15) India (82) Irak (14) Italia (22) asa (84) Malezia (12) Meksika (22) ny vola (33) Nizeria (12) Norvezy (12) Pakistan (13) mpitsoa-ponenana (36) Rosia (14) Arabia Saodita (9) am-pianarana (20) Espaina (18) fianarana (34) Soisa (7) Thailand (13) zavatra vidiana (107) zavatra atao (48) Travel (162) vorontsiloza (25) Emira Arabo Mitambatra (15) Oganda (9) UK (55) USA (34) rohy mahasoa (23) Venezoela (12) visa ho (92)